04/01/2013 - 05/01/2013 - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အင်းဝခေတ် ဗုဒ္ဓဆင်းတုများ မကြာခဏပျောက်ဆုံး
ရွှေဘိုမြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက်ရှိ အေဒီ ၁၇ ရာစု အင်းဝခေတ် ဗုဒ္ဓဆင်း တုတော်များ မကြာခဏ ခိုးယူ ခံနေရကြောင်း ရှေးဟောင်း ဆင်းတုတော်များ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသည့် ရွှေဘို မြို့နယ် ကျောက်မြောင်းမြို့နယ်ခွဲ မခေါက်ကျေးရွာ နန်းဦးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဦးကုဏ္ဍလက မိန့်ကြားသည်။ ---
လောကဥသျှောင်ဂူဘုရားအတွင်းက၊ မင်စာကဗျာမှာပါတဲ့ ပြုပြင်ပြီး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတုတော်
အိမ်ဦးခန်းရောက်နေတဲ့ ဓားပြ (သို့) မြေအောက်ရေ ခမ်းခြောက်မှု (ရုပ်/သံ)
ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူတွေ အများစုဟာ ဂျိုးဖြူ ရေပိုက်ကလာတဲ့ ရေချိုတွေကို အဓိကထား အားပြုသုံးစွဲနေရာက မြေအောက်ရေကို အဝီစိတွင်းတူးပြီး ထုတ်ယူ သုံးစွဲတဲ့ ပမာဏဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် မြင့်တက်လာ နေပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့ရှိ ဗလီနှင့် ဈေးဆိုင်ခန်းများ ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်ဖျက်ဆီးမှုများအား အရေးယူမည်
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်သူ(၂ဝဝ)ဦးခန့်မှ ၁၃၁၅ အချိန် ဥက္ကံမြို့၊ အနော်ရထာ ရပ်ကွက်ရှိ ဈေးဗလီသို့ ရောက်ရှိလာပြီး လူ(၁ဝ)ဦးခန့်မှ အုတ်နီခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်၍ ထွက်ပြေး သွားခဲ့သဖြင့် ဗလီရှေ့ရှိ ၃ × ၃ ပေခွဲခန့်ရှိ မှန်(၆)ချပ် ကွဲသွားခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်မီတာပုံး(၂)ပုံး ကျိုးပဲ့ပျက်စီးကာ
photo: RFA/ Moe Thu Aung, Kyaw Zawe Win
အလုပ်သမားစေလွှတ်မှု မြန်မာအစိုးရက ပြန်လည်စိစစ်မည်
ထိုင်းနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သမားတွေ တရားဝင် စေလွှတ်နေမှုမှာ အလုပ်သမားတွေ အပေါ် အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ အကာအကွယ် ပေးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ပြီး စိစစ်မယ်လို့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၂ ခုအနေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူ အလုပ်သမား ငှားရမ်း ခန့်ထားရေး စာချွန်လွှာ (အမ်အိုယူ) အရ စေလွှတ်လိုက်တဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတာ ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်တင်ပြဖို့နဲ့ စိစစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကာလမှာ အလုပ်ခေါ်စာတွေ ဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ ဧပြီ ၂၅ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ စေလွှတ်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က အလုပ်သမားလိုအပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ၊ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာမှာ အချိန်ကြန့်ကြာမှုရှိတဲ့အတွက် မြ၀တီမြို့မှာ စောင့်နေရတဲ့ အလုပ်သမားတချို့က သည်းမခံနိုင်ဘဲ နေပြည်တော် အလုပ်သမားရုံးကို တိုင်တန်းကြတဲ့အတွက် အခုလို ဆောင်ရွက်တာလို့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ခေတ်သစ်စံကုမ္ပဏီလိမိတက်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းထိုက်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“မြ၀တီမှာကြာတော့ အလုပ်သမားတွေက နေပြည်တော်ဖုန်းတွေကို လှမ်းဆက်ပြီး ကျနော်တို့ ဘယ်နှလကြာနေပြီဆိုပြီး ၁ ရက်ကို ၄-၅-၆ ကြိမ်ဆက်မှာပေါ့။ အဲတော့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကနေ ကျနော်တို့ဆီ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုပြီး မေးလ်ပို့ပြောတာ ရှိတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံသူဌေးကနေ လူအယောက် ၅၀၊ ၁၀၀ ခေါ်မယ်ပေါ့၊ အလုပ်ခေါ်စာကျလာပြီဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးမှာ တုံးထုရတယ်။ အဲဒါထုပြီးရင် အလုပ်သမားပို့ဖို့၊ စုဆောင်းဖို့ကိစ္စတွေ စလုပ်ရတယ်။ အဲဒါပြီးရင် နေပြည်တော် ဆက်တင်ရတယ်။ နေပြည်တော်ကကျလာပြီးမှ မြ၀တီမှာ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရယ်၊ အက်စ်ဘီကလူတွေရယ်၊ ပြည်ထဲရေးက လူတွေရယ် သူတို့ရှေ့မှာပဲ စာချုပ်ချုပ်ပြီး တရားဝင်လုပ်ရတာ။”
လက်ရှိအခြေအနေအရ ထိုင်းနိုင်ငံထဲ တရားဝင်အလုပ် ၀င်လုပ်ဖို့ မြ၀တီမှာ ရောက်နေတဲ့ အလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး တချို့က ၂ လ ကျော်၊ ၃ လအထိ ရှိပေမယ့် ခုထိ မ၀င်ရသေးကြောင်း၊ မစောင့်နိုင်တဲ့သူတချို့က စရိတ်အရှုံးခံ အိမ်ပြန်သွားကြပြီး တချို့က အသိမိတ်ဆွေ အဆက်အသွယ်နဲ့ တရားမ၀င် ၀င်သွားကြတယ်လို့ အလုပ်သမားတဦးက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သောင်းကတော့ အလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို အမ်အိုယူနဲ့ ၀င်လာပေမယ့်လည်း အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ၂ နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူတွေရော၊ ကုမ္ပဏီတွေကပါ ဒီပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းပေးရာမှာ အားနည်းနေကြောင်း၊ အစိုးရက ခုလို စာထုတ်ပြန်ပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးမှာကို ကြိုဆိုပေမယ့် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး ထိရောက်မှုရှိဖို့ လိုကြောင်း ပြောပါတယ်။
“မြန်မာအစိုးရက ပြန်လည် စိစစ်မယ်ဆိုတာကို မူအားဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျနော် သတိထားမိသလောက် ၂ နှစ်ကာလအတွင်း အမ်အိုယူနဲ့လာတဲ့ အလုပ်သမား ၁ သိန်းထက်မနည်း ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေပြီ။ အေဂျင်စီတွေကို မြန်မာအစိုးရက ဘယ်လိုပုံစံနဲ့စိစစ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတယ်။ သို့သော် အမ်အိုယူ တင်သွင်းခွင့်၊ သူတို့ ပိုက်ဆံယူပြီး ခွင့်ပြုထားတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ပေါက်တပေါက် ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါစေ။”
အမ်အိုယူပြဿနာမှာ အလုပ်ရှင်ဘက်က လိုလားတဲ့ အလုပ်သမားအရေအတွက် ထက်ပိုပြီး ကုမ္ပဏီက စေလွှတ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါ အလုပ်သမားတွေ ဒုက္ခရောက်ရတာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ လုပ်အားခနဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အလုပ်သမားလက်မှတ်လုပ်ဆောင်တာတွေမှာ နဂိုက စာချုပ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာ ၂ နိုင်ငံ သဘောတူ အလုပ်သမားငှားရမ်းခန့်ထားရေး စာချွန်လွှာအရ မြန်မာပြည်ကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကို အလုပ်သမားတင်သွင်းတာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တာပါ။
လက်ရှိ အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ ရဲဝင့်နဂါး၊ ဆွေဆွေစံ၊ ရွှေလမ်းဖွင့်၊ ခေတ်သစ်စံ၊ ဟိန်းမြင့်မြတ်၊ ဒါနာ၊ ပြည်သူ့ရွေးချယ်မှု၊ တော်ဝင်ရွှေတံခါး၊ ယွန်းနဒီဦး၊ မြန်မာအိတ်စ်ပရက်စ်လင့်ခ်၊ ဟော်နန်းနဲ့ မေ၀င့် စတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
by နန်းမြနဒီ (ဒီဗွီဘီ)
ထိုင်းနိုင်ငံ စခံလဘူရီခရိုင်အတွင်းရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံတရုံ (ဓာတ်ပုံ-ရိုက်တာ)
ဥက္ကံမြို့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ
ဒီကနေ့ဧပြီလ ၃ဝ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကံမြို့ဈေးအတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကိုရင်တစ်ပါးတို့ မတော်တဆတိုက်မိပြီး သပိတ်ပြုတ်ကျရာက စတင်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခကြောင့် ဥက္ကံမြို့မှာရှိတဲ့ ဗလီတစ်လုံး၊ နေအိမ်နဲ့ ဆိုင်ခန်း ၅ဝ ကျော် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဥက္ကံမြို့သို့ ဆက်စပ်မြို့နယ်များဖြစ်သည့် မှော်ဘီ၊ လှည်းကူး၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်များမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့များမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရဲတပ်ရင်း(၃)/ (၅)/(၆)များမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရ်ျ လုံခြုံရေး အဖွဲ့များ အနေဖြင့် ဥက္ကံလုံခြုံရေးအား စိုးမိုးရယူထားလျက်ရှိပြီး နယ်မြေ အေးချမ်းလျက်ရှိပါသည်။
ဥက္ကံမြို့အား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒေသန္တရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားရှိပါသည်။
ဥက္ကံမြို့တွင် ဈေးပတ်လမ်းရှိ ဆိုင်အချို့ ပျက်ဆီးခဲ့ပြီး အနော်ရထာရပ်ကွက်ရှိ ဈေးဗလီ တွင် ကြီးမားသည့် ပျက်ဆီးမှု မရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိပါသည်။
ထားဝယ်တက္ကသိုလ်ဝင်း အတွင်း “ချဉ်ပေါင်ကျား” (ခေါ်) “အင်းကျား” တစ်ကောင်ကိုဧပြီ ၂၈ရက်ကတွေ့ရှိ၍ မွေးမြူ စောင့်ရှောက်ထား ကြောင်း သိရသည်။
တောမိုးတောင်ခြေနှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိသည့် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်ဝင်း အတွင်းရှိ ရေတွင်းတစ်တွင်းထဲသို့ ကျနေသော ကြောင်သာသာအရွယရှိ်ထားဝယ်ဒေသအခေါ် “ချဉ်ပေါင်ကျား” (ခေါ်) “အင်းကျား”တစ်ကောင်ကို နယ်မြေ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက တွေ့ရှိပြီး ၊ ယခုအခါ ၄င်း၏အိမ်တွင်ပင်
မွေးမြူ စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
“ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာကတော့ ဒီကျားအငယ်လေးတွေကို မကြာမကြာတွေ့ရ တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မွေးထားတဲ့ ကြက်တွေကို လာလာဆွဲ တတ်တာကလွဲလို့ လူကိုတော့ အန္တရာယ်မပြုပါဘူး၊ ဆရာ၊ ဆရာမတစ်ချို့ဆို ညည လမ်းလျှောက်ရင်း ဒီအကောင်လေးတွေ ဖြတ်ပြေးတာမျိုး မြင်နေကျပါ ၊ ခုလည်းအစာလာရှာရင်း ရေတွင်းထဲပြုတ်ကျပုံရပါတယ် ” ဟု အင်းကျားကို ရရှိထားသူ
ထားဝယ်တက္ကသိုလ်သည်ထားဝယ်မြို့မှ အနောက်ဘက် (၄) မိုင်ခန့်အကွာ ထားဝယ်မြစ်အနောက်ဘက်ရှိ လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ ကမျောကင်းရွာတွင်တည်ရှိပြီး (၃၇၀.၇)ဧကခန့် အကျယ်အ၀န်းရှိသည်။
သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ - ဖိုးဇော်(ထားဝယ်)
တရုတ်စစ်လေယာဉ် မရရှိဟု ယူဒဗလျူအက်စ်အေ ငြင်းဆို
တရုတ်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့ စစ်ရဟတ်ယာဉ်တွေ ရရှိတယ်လို့ စစ်သတင်းအသားပေး ဂျိမ်းစ် လစဉ်ထုတ်ဂျာနယ်ရဲ့ရေးသားချက်အပေါ် “၀”ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (ယူဒဗလျူအက်စ်အေ) က ငြင်းလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီနဲ့ မတ်လမှာ ဝေဟင်ပစ်ဒုံး တီဝိုင်-၉၀ (TY-90)နဲ့ အလယ်အလတ် သယ်ဆောင်ရေး Mil Mi-17 ရဟတ်ယာဉ်တွေကို တရုတ်က ယူဒဗလျူအက်စ်အေအဖွဲ့ကို ပေးခဲ့တယ်လို့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အစိုးရ သတင်းရင်းမြစ်တွေကို ကိုးကားပြီးတော့ ဧပြီ ၂၉ ရက်ထုတ် ဂျိမ်းစ် လစဉ်ထုတ်ဂျာနယ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေကို တရုတ်မှာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ယူဒဗလျူအက်စ်အေ က လေယာဉ်မှူးတွေက မောင်းတာလား၊ တရုတ်လေယာဉ်မှူးတွေက မောင်းတာလား ဆိုတာ ကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူးလို့ ဂျိမ်းဂျာနယ်က ရေးပါတယ်။
Mi-17 ရဟတ်ယာဉ် ၅ စင်းကို တရုတ်ကနေ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ လာအိုဘက်က တဆင့် မဲခေါင်မြစ်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ ယူဒဗလျူအက်စ်အေအဖွဲ့ ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေကို ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် သတင်းရင်းမြစ်ကို ကိုးကားထားသလို မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ ၂ စင်းပဲ ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ အတည်ပြုနိုင်တဲ့အကြောင်း အစိုးရ သတင်းရင်းမြစ်ကို ကိုးကား ရေးသားထားပါတယ်။
ယူဒဗလျူအက်စ်အေအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်မြင့်ကို မေးမြန်းရာမှာတော့ ဒီသတင်း မှားယွင်းတယ်လို့ ဖြေဆိုပါတယ်။
“မောင်းတတ်တဲ့လူလည်းမရှိ၊ နားလည်သူလည်းမရှိ ဘယ်သူက လာထောက်ပံ့မှာလဲ။ သတင်းကမဖြစ်နိုင်တဲ့ သတင်းပါ။ အပြင်က ပြောပြောနေတဲ့ ယူဒဗလျူအက်စ်အေက တရုတ်ကထောက်ပံ့တာတွေ သုံးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ ဒါတွေက အရင် ဗကပ ခေတ်ကတည်းက လက်နက်တွေအများကြီးပါ။ ဒီသတင်းတွေ. ၀ ကို ရဟတ်ယာဉ်တွေ ထောက်ပံ့တယ်၊ ပေးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထုတ်တဲ့သူ ကိုယ်တိုင်က ဘာလို့ ထုတ်လဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပဲ။ ၀ မှာက ပညာတတ်တွေလည်း မရှိဘူး။ ရဟတ်ယာဉ်မောင်းတတ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာလို အတတ်ပညာရှင်တွေလည်း ရှိမှမရှိဘဲ။ သတင်းထုတ်တဲ့သူကို ပြန်မေးရမယ်၊ ဘာသဘောနဲ့ ဒီ သတင်းထုတ်လဲဆိုတာ။”
ဒီသတင်းသာ မှန်မယ်ဆိုရင်တော့ ရုရှားဆီကနေ မကြာခင်ကမှရရှိခဲ့ပြီးတော့ ကချင် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ Mi-24Pကို TY-90 ဒုံးကျည်က တားဆီးနိုင်မယ်လို့လည်း ဂျာနယ်မှာရေးပါတယ်။
တီဝိုင်-၉၀ (TY-90)ဟာ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကနေ ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ တရုတ်လုပ် ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အပေါ် ရန်ကုန်အခြေစိုက် တရုတ်သံရုံးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီလို လက်နက်တွေအပြင် လူသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ် (MANPADS) ကိုလည်း ယူဒဗလျူအက်စ်အေအဖွဲ့က တရုတ်ဆီကနေ တဆင့် ၂၀၀၁ မှာ တပ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ ဒီဂျာနယ်က အရင်က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ဆီကနေ လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ယာဉ်တွေကို ယူဒဗလျူအက်စ်အေအဖွဲ့က ရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ဂျိမ်းဂျာနယ်ရဲ့ ရေးသားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးက ဇန်န၀ါရီလတုန်းက ငြင်းဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့တွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦနှင့် ဆိုင်ခန်းအချို့ ဖျက်ဆီးခံရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဥက္ကံမြို့နယ်မှာ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက ဘာသာရေးအဆောက်အဦနဲ့ ဆိုင်ခန်းတချို့ ဖျက်ဆီးမှုခံခဲ့ရတယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
မိတ္ထီလာခရိုင်နဲ့ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်းက မြို့နယ်တွေမှာ ဖျက်ဆီးမှုတွေဖြစ်ပွားပြီး ငြိမ်သက်နေရာကနေ ဥက္ကံမြို့မှာ ပြန်ဖြစ်တာပါ။
ဒီနေ့ မနက် ၁၀ နာရီခန့်က ဥက္ကံမြို့နယ်က ဘုရားကြီးဈေးထဲမှာ ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် ကိုရင်တပါးကို အမျိုးသမီးတဦးက ဆိုင်ကယ်နှင့်တိုက်မိလို့ သပိတ်ကွဲရာကနေ ဆူပူမှုတွေဖြစ်ပွားပြီး ဘာသာရေးအဆောက်အဦ ၂ ခုနဲ့ ဆိုင်ခန်းတချို့ ဖျက်ဆီးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဥက္ကံမြို့မှာ နေထိုင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့ဈေးနားမှာ နေထိုင်သူ မြို့ခံတဦးက “ကိုရင်လေးက ဈေးထဲဆွမ်းခံကြွတာ အဲမှာဆိုင်ကယ်က၀င်တိုက်တော့ သပိတ်ကွဲသွားတယ်။ သူက မချေမငံဆက်ဆံတယ်။ ဘေးလူတွေက မကျေမနပ်ဖြစ်တယ်။ အလိုလိုမှ ဖြစ်ချင်နေတာ၊ ထိန်းမရသိမ်းရဖြစ်ကုန်တာ။ အဲမှာ မခံချင်စိတ်တွေနဲ့ လူတွေကစုလာပြီး ဗလီတွေဖျက်၊ ဆိုင်တွေပါဖျက် ဖြစ်ကုန်တယ်။ ရဲက သေနတ်ဖောက်တားရတဲ့ အဆင့်ရောက်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့နယ် ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်နဲ့ ရွာတွေကလူတွေပါ ပါဝင်လာတဲ့အတွက် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ သံဃာတော်တွေနဲ့အရပ်သားတွေ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဥက္ကံရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး အပျက်အစီး စာရင်းကိုတော့ စစ်ဆေးနေဆဲပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့ အဓိကရုန်း အခြေအနေ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ရရှိတဲ့ ကနဦး သတင်းများအရ ဥက္ကံမြို့မှာ ဆွမ်းခံတဲ့ ကိုရင်နဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦး တိုက်မိပြီး သပိတ်လွတ်ကျတဲ့ ဖြစ်စဉ်က အစပြုကာ ဒီနေ့ နေ့လည် တစ်နာရီကျော်မှာ ဗလီနဲ့ အနီးက ဆိုင်ခန်းအချို့ကို တိုက်ခိုက်မှုပြုခဲ့ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ က သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲ ခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ ညနေသုံးနာရီကျော်မှာ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များလည်း ရောက်ရှိသွားပြီလို့ သိရှိရပါတယ်။
ဆိုင်ခန်းအချို့ ပျက်စီးပြီး ဗလီက မှန်အချို့ကွဲသွားကြောင်း၊ မီးလောင်ပျက်စီးမှုမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
အခြေအနေအသေးစိတ်သိရှိရပါက မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ သတင်းထုတ်ပြန် ပေးပါ့မယ်။
ဦးရဲထွဋ် - Facebook
ချင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်သည့် အိန္ဒိယ အရှေ့ မြောက်ဘက် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ ကျန်ဖိုင်းခရိုင်ရှိ Saikhumphai ကျေးရွာရှိ လူနေအိမ် ၄၀ လုံးကို ဒေသခံလူထုက မီးရှို့လိုက်တယ်လို့သိရသည်။
ဧပြီလ ၂၉ ရက် မနက်ပိုင်းက Saikhumphai ကျေး ရွာရှိ ချင်းလူမျိုး များနေထိုင်နေကြ သည့် နေအိမ် ကို Vaphai လူထု ၁၀၀ ကျော်က မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း လို့ Saikhumphai ကျေး ရွာနေ ချင်းအမျိုး သားတဦးက ပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ရွာကိုမီးရှုဖို့ Vaphai ကျေး ရွာ လူထု အသက် ၁၅ မှ ၆၀ ကြားလူထုအများကြီး ကျတော်တို့ နေတဲ့ ရွာဘက်ကို တက်လာတယ်၊ မီဇိုရမ်ရဲတွေ ကဟန့်တားနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ၊ Tiau ချောင်းဘက်ကနေ လူဦးရေ ၁၀၀ ခန့် ထပ်ရောက်လာတော့ ပြည်သူရဲတွေကလည်း မဟန့်တား နိုင်တော့ဘူး၊ အဲဒီလူတွေက ကျနော်တို့နေတဲ့ အိမ်တွေ မီးရှို့ လိုက်တယ်” ဟုအဆိုပါ ချင်းအမျိုးသား တဦးက ပြောပါတယ်။
Tuai ချောင်း ဘက်ကနေ တက်လာတဲ့ Vaphai ရွာသားများသည် ပုလင်းထဲ ရေနံဆီထည့် ထားပြီး နေ့လယ် ၁၂ နာရီကျော်တွင် ပုလင်းကိုမီးရှို့ ကာ ပုလင်းနဲ့ Saikhumphai ကျေးရွာ သားများ၏ နေအိမ်ကိုပေါက်ကာ တရွာလုံးမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Saikhumphai ရွာသားတချို့ သည် အဝက်အစား၊ အိပ်ယာ၊ အိုးခွက်ပန်းကန်များကို သာ ပြန်ရနိုင် ကြပြီး ယခု လောလောဆယ် မည့်သည့်နေရာတွင် အခြေစိုက်မည်၊ ဘယ်ဖက်ကို ဦးတည်ပြီး ပြောင်းရွှေ့မည်ကို မသိရှိဘဲ ရွာနီးနားတွင် ခေတ္တာ ခိုလှုံနေ ဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ငိုတဲ့သူကငို၊ ကျနော်တို့မှာ သွားစရာ၊ နေစရာကို မရှိတော့ဘူး လမ်းဘေးမှာဘဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေ ကြတယ်” ဟုဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အခုမီးရှုခံလိုက်ရသည့် အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ခွင့် ID ကပ်ပြားရှိထား သည့် ပုဂ္ဂိုလ် များ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသော်လည်း ကျန်ဖိုင်ခရိုင် Khawbung ကျေးရွာ ရဲမှူး Pu Lalrohlua က တရားမ၀င် မီဇိုရမ်ထဲတွင် နေထိုင်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ထို့ ကြောင့် တရားမ၀င်နေထိုင်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများကို ခရိုင်တရားရုံးက ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၃၁)တွင် Saikhumphai ကျေးရွာမှ ထွက်ခွါကြရန် အမိန့် ထုတ် ထားပြီးဖြစ် သည်။
Saikhumphai ကျေးရွာတွင် Pu Fungthanga, Vanlalkunga, Rozama, Rinmuani, Tialmenpari, Manglianhrea, Rohungliana, Lalnunthanga, Paktinthanga, Tawkruaia နှင့် Thawngliankapa မိသားစုများနေထိုင်ကြပြီး လူဦးရေအားဖြင့် (၇၃) ဦးရှိကြောင်း ရဲမှူး Lalrohlua အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
သို့ သော် ဒေသခံများကမူ မီးရှို့ ခဲ့သည့် အိမ်ခြေ (၄၀) ရှိကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
Saikhumpai ကျေးရွာသည် ၁၉၆၃ ခုနှစ်ကတည်းကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေ ချင်းလူမျိုး တချို့ စတင်ပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်ပြီး Vaphai ကျေးရွာကောင်စီအဖွဲ့ကလည်း အသိ အမှတ်ပြုကာ နေထိုင်ခွင့်ပြုထားသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ နေထိုင်ခွင့်ပြု၍ ချင်းလူမျိုးများသည် ၄င်းကျေး ရွာတွင် နေထိုင်ကြပြီး တောင်ယာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခဲ့ကြသည်။
မီဇိုရမ်အာဏာပိုင်များသည် ၂၀၁၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်တွင် ချင်းလူမျိုးလူဦးရေ ၈၀ ခန့်ကို ကျေးရွာ ကနေ မောင်းထုတ်လိုက်ကြပြီး သူတို့နေ ထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်တွေကိုလည်း ချိတ်ပိတ်ခဲ့ သည်။
အမေရိကန်ထိပ်တန်း Ford ကားပြည်တွင်း၌ ရောင်းချတော့မည်
ရန်ကုန် ဧပြီ ၃၀
အမေရိကန်ထိပ်တန်း Ford ကားများအား ယခုနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်း၌ စတင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပဏ်ီမှ ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အင်းလျားလိခ်ဟိုတယ်၌ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Ford ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြည်တွင်းမှ Capital Automotive ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ မော်တော်ကားအသစ်များ စတင်တင်သွင်းသွားမည် ဟု Capital Automotive ကုမ္ပဏီမှ ဦးခင်ထွန်းကပြောသည်။
၏ပထမဦးဆုံး အရောင်းပြခန်းအား ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ် အင်းစိန်လမ်းမပေါ်တွင် တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုအပိုင်းနှင့် အပိုပစ္စည်း များအတွက်ပါထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အရောင်းပြခန်း၌ Ford ၏ One Ford ကားများ ၊ ထရပ်ကားများနှင့် SUV ကားများ စတင်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သုတလင်း - Popular Myanmar News Journal
ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းရှိ တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ၎င်းတို့၏ ရဲစခန်းမှူးအပေါ် မကျေနပ်မှုများ (ပေးစာ)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ်တင်အောင်သည်၊ လက်အောက်တပ်ဖွဲ့ ၀င်များအပေါ် ဒီမိုကရေစီဝါဒနှင့်အညီ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်ဟု သဘောမထားဘဲ၊ အာဏာရှင်ဝါဒကို ယနေ့ထိ စွဲ ကိုင်ကျင့်သုံးကာ၊ မောက်မာရိုင်းပြစွာ ခွဲခြားဆက်ဆံသည့်အပြင်၊ လူအများရှေ့တွင် လက်အောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကို အရှက်ရစေသော နည်းလမ်းဖြင့် ရိုက်နှက်၊ ထိုးကြိတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်တင်နေသဖြင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့မှ နာကြည်းမှုများရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
အထူးသဖြင့် နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့မှာ ၎င်းတို့၏ဆန္ဒမပါဘဲ၊ အဓမ္မ တာဝန်ပေး စေခိုင်းခြင်း ခံနေရ ပြီး၊ နယ်မြေအတွင်းရှိ ဒုစရိုက်သမားများထံမှ လိုင်းကြေးငွေများကို ထောင်နှုတ်ခမ်းနင်း၊ ဦးခေါင်းရင်း၍ ကောက် ခံပေးနေရပါသည်။
ထို့အပြင် ရဲစခန်းတစ်ခုလုံး၏ လစဉ် အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း၊ ရပိုင်ခွင့်သာလွန်သော စခန်းမှူးနှင့် အရာရှိများက ၎င်းတို့၏ ရပိုင်ခွင့်များထဲမှ အပွန်းပဲ့ မခံဘဲ၊ နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်(၁၀)ဦး ကိုသာ အနိုင် ကျင့်ကာ အချိုးချ၊ ကျခံစေသောကြောင့် နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ တစ်ဦးလျှင် လစဉ်၊ ငွေကျပ် တစ်သိန်း ကျော်စီ စိုက်ထုတ်ပေးသွင်း ကုန်ကျနေရပါသည်။
ထိုသို့ ကုန်ကျနေရသဖြင့် ၎င်းတို့၏ လစာငွေအား ထုတ်ယူခွင့် မရသည့်အပြင်၊ လိုအပ်သောငွေကို လည်း မရမက ရှာဖွေပေးဆပ်နေရသဖြင့် ဇနီးမယားများကို စားရိတ် မအပ်နိုင်သောကြောင့် အိမ်တွင်ရေး ပဋိ ပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပြီး၊ မိသားစု စားဝတ်နေရေး၊ ကလေး ကျမ္မာရေးနှင့် ကျောင်းသားများ ပညာရေးတို့ အတွက် ချို့တဲ့နစ်နာမှုများ ရှိနေကြောင်းသိရသည်။
ထိုနစ်နာမှုများကြောင့် နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့က နယ်ထိန်းတာဝန်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးပါရန် တောင်း ဆိုသော်လည်း၊ စခန်းမှူးမှ ပေးမထွက်သည့် အပြင်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အခြေခံသော ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိနေသဖြင့် စခန်းမှူးအပေါ် မကျေနပ်မှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ရွာသားများအား မတရားဖမ်းဆီး ကြိုးတုတ်ပြီး ရိုက်နှက်
ဧပြီလ ၂၆ ရက် ၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၄ နာရီခွဲခန့်တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ရခိုင်ကွန်ဒိုင်ကျေးရွာမှ စက်လှေဖြင့် ဘူးသီးတောင်မြို့သို့ဈေးဝယ်ထွက်ရန် အသွားလမ်းတွင် ဒပြုချောင်းတံတားကင်းစခန်းသို့ ဝင်ရောက်သတင်းပို့စဉ် ဒုအရာခံဗိုလ်မြင့်လွှင်နှင့် အပေါင်းပါ ရဲဘော်(၂) ဦးက စက်လှေပေါ်လိုက်ပါလာသည့် ရခိုင်ကွန်ဒိုင်ကျေးရွာမှ မိန်းမ(၂) ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်မလှဝင်း(ဘ) ဦးထွန်းအောင်ဖြူ၊ အသက်(၃၇)နှစ် နှင့် ဒေါ်မစောရွှေ(ဘ) ဦးမောင်စံလှ၊ အသက် (၁၈) နှစ် တို့အား ကုန်းပေါ်သို့ကိုယ်လက်များကိုကိုင်၍ ဆွဲတင်သည်။
ထိုစဉ် စက်မောင်း ဦးမင်းသူထွန်း(မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ၁၁/ဘသတ(နိုင်)၀၂၉၉၉၄) (ဘ) ဦးသန်းထွန်း၊ အသက်(၂၂)နှစ် က ထိုသို့ကိုယ်လက်များကိုင်၍ တင်စရာမလိုကြောင်းပြောရာ ဒုအရာခံဗိုလ်မြင့်လွှင်က ကြမ်းတမ်းစွာဆဲဆိုပြီး မြေပေါ်ပက်လက်မှောက်ခိုင်းပြီး ကျောကို သစ်သားတုတ်ဖြင့် (၂)ချက် တအားရိုက်နှက်ပြီး ကျန်ရဲဘော်တစ်ယောက်က လက်သီးဖြင့် မျက်နှာကို ညာ(၅)ချက်၊ ဘယ်(၇) ချက် တအားထိုးသည်။ ထို့အပြင် ဦးမင်းသူထွန်းအား စခန်းထဲ့ဆွဲသွင်းပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ကြိုးတုတ်ကာ ခြေနှစ်ဘက်ကိုလည်းကြိုးတုတ်ပြီး မြေပေါ်တအားလှဲချသည်။
ခြေနှစ်ဖက်လုံးကို သစ်လုံးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ကြိတ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအား သစ်သားတုတ်ဖြင့် အကြိမ်(၁၀) ထက်မနည်း ရိုက်နှက်သည်။ ထိုစဉ် လှေပေါ်ပါလာသည့် ဦးကျော်ဇောလှ( မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ၁၁/ဘသတ(နိုင်)၀၁၁၈၅၆) (ဘ) ဦးထွန်းအောင်ဖြူ၊ အသက်(၃၇)နှစ်က ဝင်တားရာ အဆိုပါ ဒုအရာခံဗိုလ်က တုတ်ဖြင့် (၂)ချက် လွဲရိုက်သည်ဟုလည်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဦးမင်းသူထွန်းမှာ ခြေ၊ နောက်ကျောနှင့် မျက်နှာများတွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိပြီး ဆေးကုသခံလျှက်ရှိသည်။ ဝင်တားသူ ဦးထွန်းအောင်ဖြူမှာလည်း ခန္ဓာတွင် ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း သိရသည်။ ထို ဒုအရာခံဗိုလ်နှင့် အပေါင်းပါတို့သည် အရက်သောက်စားထားသည်ဟုလည်း ဦးထွန်းအောင်ဖြူက ဆိုသည်။ ထိုသို့ အနိုင်ကျင့်မှုကို ဘူးသီးတောင်ရဲစခန်းတွင် သွားရောက်တိုင်ကြားရာ လက်မခံကြောင်းလည်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဒုအရာခံဗိုလ်နှင့် ရဲဘော်တို့သည် ဧပြီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၃ နေ့ကလည်း လှေပေါ်ပါလာသည့် မိန့်ကလေးတစ်ဦးအား ပေးရန်တောင်းသည်ဟု ဦးမင်းသူထွန်းပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ရွာသူတွေပါဟုငြင်း၍ အငြိုးဖြင့် ယခုလိုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း သူကဆိုသည်။
၎င်း ကင်းစခန်းတွင် ထိုသို့အနိုင်ကျင့်မှုများ မရှိခဲ့ဖူး အဆိုပါ ဒုအရာခံဗိုလ်ရောက်လာမှ ထိုသို့ပြုမူခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သူကပြောပြသည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့် တပ်မတော်သားများ ပြည်သူများကို အကာအကွယ်ပြုရမည့်အစား ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလူနည်းစု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို နိုင်ထက်စီးနင်းပြုနေခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးတို့ သိစေလိုကြောင်းနှင့် ထိထိရောက်အရေးယူ စေလိုကြောင်းလည်း ဦးမင်းသူထွန်းက ဆိုသည်။
ရိုက်နှက်ခံရသူ ဦးမင်းသူထွန်း(ဘ) ဦးသန်းထွန်း (၂၂)နှစ်
ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့ ထုတ် စီးပွါးရေး သတင်းဂျာနယ် အတွဲ ၁၃ ၊ အမှတ် ၁၅
ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့ ထုတ် အိုင်စီတီ ဂျာနယ်, Vol. 2, Issue 15
လူတိုင်း ပညာသင်ကြားရေး မသင်မနေရ မူလတန်းပညာရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသင့် ဟုဆို
မသင်မနေရ မူလတန်းပညာရေး စနစ် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မသင်မနေရ ပညာရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းသင့်ကြောင်း အခြေခံ ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဦး က The Voice သို့ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မသင်မနေရ မူလ တန်းပညာရေးကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာ သင်နှစ်၌ စတင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ရာတွင် အလုံးစုံ လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် ဥပဒေတစ်ခု ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ၄င်းက အကြံပြုသည်။
"လောလောဆယ်တော့ ဥပဒေဆွဲတဲ့ နေရာမှာ ကူညီဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ဘာသာ ရေးဆွဲမှာပါ" ဟု ဦးသန်းဦးက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
အခြေခံပညာကဏ္ဍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အမျိုးသားပညာရည် မြင့်မားရေး နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲတွင် ဖတ်ကြားသော ခေတ်စနစ်နှင့် အညီ အခြေခံပညာကဏ္ဍ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး စာတမ်း၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မသင်မနေရ မူလတန်းပညာရေး စနစ် အောင်မြင်ရန် မသင်မနေရ မူလတန်းပညာရေး ဥပဒေကို ရေးဆွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက မသင်မနေ ရ မူလတန်းပညာရေး အတွက် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် ကျပ် ၁၈၃၅ ဒသမ ၅ သန်းဖိုး ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နှင့် ကျောင်းသုံး ဗလာစာအုပ် ကျပ် ၇၂၂၄ သန်း ဖိုးခန့် နှင့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်တွင်မူ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်၊ ဗလာစာအုပ် တို့အပြင် ငွေကျပ် တစ်ထောင်စီပါ ထောက်ပံ့ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
မြို့နယ်လုံးကျွတ် မသင်မနေရ မူလတန်းပညာရေး ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ် လေးမြို့နယ်တွင် ယခုပညာသင်နှစ်၌ စမ်းသပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
နိုင်ငံအလိုက် အခြေခံပညာရေး ကဏ္ဍတွင် မသင်မနေရ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ပညာရေး တို့ကို အစိုးရက ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကျွန်းငယ် ၃ ခု ပြဿနာ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ကျွန်းငယ် ၃ ခုအပေါ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲက ထိုင်းလူဆိုးတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းလူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေဟာ တရားမ၀င်အလုပ်သမားတွေကို အဲဒီကျွန်းငယ်တွေပေါ်မှာ ၀ှက်ထားကြရာက ပိုင်နက်ပြဿနာ အသစ်တဖန် ပြန်ပေါ်လာရတာလို့ ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲ ဖရာယွတ် ချန်အိုချာက ပြောဆိုကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာက ဖေါ်ပြပါတယ်။
TBC ခေါ် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကော်မတီဝင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေက ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဗြိတိသျှအစိုးရ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့မြေပုံတွေအရ အဲဒီကျွန်းငယ်တွေဟာဟာ မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းမှာရှိကြောင်း၊ အဲဒီခွန်လမ်၊ ခွန်ခမ်နဲ့ ခွန်ခီနော့ ကျွန်းတွေပေါ်ကို ထိုင်းလူမျိုးတွေ တက်ရောက်နေတဲ့အပေါ် မြန်မာအစိုးရက တားမြစ်လိုက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖရာယွတ်ကတော့ ဒီကျွန်းတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာဟာ ကြာမြင့်လှပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီကျွန်းတွေကို ဘယ်ဘက်ကမှ အသုံးမပြုကြဖို့ TBC ခေါ် ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ်ကော်မတီမှာ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ထိုင်းလူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေကြောင့် ဒီပြဿနာဟောင်းဟာ အသစ်ဖြစ်လာရကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီအတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်ချင်ဘဲ ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်သာ အပြစ်တင်ချင်ပါတော့တယ်၊ သူတို့ဟာ တိုင်းပြည်မျက်နှာမကြည့်ဘဲ ကိုယ်ကျိုးကိုသာကြည့်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကင်းမဲ့သူတွေပါပဲလို့ ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာမှာ မြန်မာတချို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်၊ ဒီပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ ဒီကျွန်းတွေပေါ်မှာ တက်ရောက်နေသူတွေကို မောင်းထုတ်ဖို့ နှစ်ဘက်သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖရာယွတ် ပြောပါတယ်။
လက်ပံတောင်း ဒေသခံ ၅ဝဝ ညောင်ပင်ကြီး ရဲစခန်းတွင် သွားရောက်ဖမ်းဆီးခံ
လက်ပံတောင်းဒေသခံ ၅ဝဝ နီးပါးဟာ မနေ့ညနေပိုင်းက ညောင်ပင်ကြီးရဲစခန်းကို သွားရောက်ပြီး သူတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေသခံတွေအဆိုအရ အာဏာပိုင်တွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ အေးချမ်းသာယာရေး ပျက်ပြားအောင်လှုံဆော်သူ ၈ ဦးကို အကူအညီပေးသူတွေ၊ ခိုလှုံခွင့်ပေးသူတွေကိုပါ အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် ခုလိုလာရောက်အဖမ်းခံတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
မနေ့က လက်ပံတောင်းဒေသခံတွေဟာ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဆန္ဒပြခွင့်ရတာကြောင့် တုံရွာကနေ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီအထိ မွန်းလွဲ ၂ နာရီကနေ ၅ နာရီအထိ ဆန္ဒပြခွင့်ရလို့ လမ်းလျောက်ဆန္ဒပြကြစဉ်အတွင်း ညောင်ပင်ကြီး ရဲစခန်းရှေ့အရောက်မှာ အခုလိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သွားရောက် အဖမ်းခံခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တုံရွာသစ်က ကိုလေးဝင်းက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“ရဲစခန်းကိုသွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဒေသခံတွေက ထမင်းချိုင့်ပေးလို့ပေ့ါ၊ အိမ်တွေမှာ လက်သင့်ခံလို့ပေါ့၊ ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ သွားပြီးတော့အဖမ်းခံတာပါ၊ နောက်လည်း လာကူညီမယ့်သူတွေကို ဆက်ပြီးတော့ ထမင်းချိုင့်ပို့မယ်၊ အိမ်တွေမှာလည်း လက်သင့်ခံမယ်ပေါ့နော် ဖမ်းချင်လည်းဖမ်းပေါ့”
ဒေသခံတွေက အကူအညီပေးသူတွေအပေါ် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဖမ်းဆီးမိန့်ကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲဝင်တွေက မူလခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကိုပဲ ဆက်လုပ်ဖို့ပြောဆိုတာကြောင့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရှေ့အထိ ဆက်လက်လမ်းလျောက်ဆန္ဒပြပြီး ညနေငါးနာရီကျော်မှာ ဒုတိယအကြိမ် ရဲစခန်းကို ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြဖို့ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့မှာ ဒေသခံနှစ်ဦး ဒါမှမဟုတ်(၃) ဦး ရဲစခန်းကို လာရောက်ဖို့ စခန်းမှူးက ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ပံတောင်းအရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ဖမ်းမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းကို AHRC ကန့်ကွက်
လက်ပံတောင်းဒေသမှာ ဒေသခံတွေကို အကူအညီပေးနေ သူတွေကို ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ အေးချမ်းသာယာရေး ပျက်ပြားအောင်လှုံ့ဆော်သူတွေအဖြစ် ဖမ်းမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာနဲ့ သူတို့အပေါ် အကူအညီပေးနေသူတွေကိုပါ အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AHRC အာရှလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။
အခုဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိသင့်တော့ဘူးလို့ အာရှလူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
AHRC အဖွဲ့က လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးမင်းလွင်ဦးက RFA ကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“လက်ပံတောင်းတောင်အရေး လှုပ်ရှားနေတဲ့သူ ၈ ဦးကို ဖမ်းဖို့အတွက် စာရင်းထုတ်ပြန်ထားတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်၊ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေနဲ့ နိုင်ငံအတွင်းမှာ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကို ခြောက်လှန့်လိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မတီက ထင်မြင်ယူဆယ်တယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီလူ ၈ ဦးကို အားပေးကူညီတယ်၊ လက်ခံတယ်ဆိုရင် အရေးယူမယ်ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ပြည်သူတွေကို ခြောက်လှန့်လိုက်တဲ့သဘောလို့ ယူဆတယ်”
တကယ်တမ်းက ဒေသခံလယ်သမားတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ အဖြေရှာသင့်ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကနေ သွေဖည်နေနေသလို၊ ခရိုနီတွေရဲ့ စီးပွားရေးကို အကာအကွယ်ပေးနေရာရောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ပြင်စွပ်စွဲခံရသူတွေဟာ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲ၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအရ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ စုရုံးပိုင်ခွင့်ကိုသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ AHRC အာရှလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့ တွင် သပိတ် အဖုံးကျကွဲရာမှ အဓိကရုန်း ဖြစ်ပွားနေ
ဥက္ကံမြို့၊ ဆင်ဖြူရှင်ရပ်ကွက်၊ အလံတိုင်ကျောင်းတိုက်နေ (၃၀.၄.၂၀၁၃) ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီ အချိန်က ကိုရင် ပုည၊ (၁၁)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမျိုးသည် ဘုရားကြီးဈေးတောင်ဘက်၊ ဘုရားကြီး လမ်းတွင် ဈေးဝယ်လာသူ မ၀င်းဝင်းစိန်၊ (၃၄)နှစ်၊ (ဘ)ဦးလူလူမျှား၊ မူဆလင်/အစ္စလာမ်မှ ၀င်တိုက် မိသဖြင့် လွယ်ထားသည့် သပိတ် လွတ်ကျကာ အဖုံးကွဲသွားသဖြင့် ရဲစခန်းသို့လာရောက် တိုင်တန်း ရ်ျ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
သပိတ်အဖုံး ကျကွဲရ်ျ ဆွမ်း နှင့် ဆွမ်းဟင်းများ မှောက်သွားခဲ့သဖြင့် မ၀င်းဝင်းစိန်မှာ သပိတ် အသစ် ပြန်လည်ဝယ်ပေးခဲ့ပြီး စခန်းမှူး မှ ဆွမ်း နှင့် ဆွမ်းဟင်းများအား လှူဒါန်းပေးခဲ့စဉ် ဈေး အနီး ရပ်ကွက်နေ ကျား/မ (၅၀)ဦးခန့်မှ မကျေနပ်သဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးစဉ် ဈေးပတ်လည်ရှိ ဆိုင်ခန်းအချို့အား ဖျက်ဆီးသဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ထိန်းသိမ်းဆောင် ရွက် လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိပါသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသသို့ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိ
လက်ပံတောင်တောင်အရေးကြိုး ကိုင်သူဟုယူဆရသူရှစ်ဦးကို ဖမိးဆီးရန် လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသတွင်တွင် အကြမ်းဖက် အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေး အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိနေကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးရုံးမှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးကပြောကြားသည်။
“အထူးနှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့တွေ ရောက်နေတယ်ဆိုတာကတော့သေချာပါတယ် တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘယ်လောက်ရောက် တယ် ဘယ်အချိန်မှာဝင်ဖမ်းမယ် မဖမ်းဘူး ဆိုတာတော့ လျို့ဝှက်မို့ မသိရပါဘူး”ဟု၎င်းကဆက်လက်ပြော ကြားသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်အရေးကြိုးကိုင်သူများဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းပေးရန်ကြေငြာချက်ထုတ်ထားသည့် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များ အခြေချနေထိုင်မှုများသည့် ဆည်တည်းကျေးရွာအနီးသို့လက်ရှိ သတင်းရေးသားနေသည့် ဧပြီလ၂၉ရက်နေ့ညပိုင်း ၁ဝနာရီခန့်အချိန်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀ဝနီးပါးခန့် ရောက်ရှိ နေကြောင်း ဆည်တည်းကျေးရွာ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များမှာ လက်ပံတောင်းတောင်အရေးသို့ ၂၀၁၂ခုနှစ်ဩဂုတ်လ အတွင်းတွင် ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ဝမ်ပေါက်ကုမ္ပဏီအနီး အခေါင်းသုံးလုံး မီးရှို့မှု ၊အောက်တိုဘာလ၉ရက်နေ့ဆဲတည်းရွာသုသာန်တွင်သေဆုံသူများပြန်လည်နိုးထလာသည့်ပါဖော့မန့်များ ၊လက်ပံတောင်းတောင်ပြည်သူ့ညီလခံနှင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများတွင် ဆည်တည်းရွာတွင်အခြေချနေထိုင်ပြီး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့ကာ၊ အောက်တိုဘာလအ တွင်းတွင်ပင် ဆားလင်းကြီးရဲစခန်း၌မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်နှင့်ဒေသခံများ အပြန်အလှန်အမှုဖွင့်မှုများရှိခဲ့ရာ၊ဦးပိုင်မှအခေါင်းသုံးလုံးမီးရှို့
ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင်ပါဝင်သူ၁၆ဦးကိုပုဒ်မ၃ခုဖြင့်အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း လက်ပံတောင်းတောင်အရေးစိတ်ဝင်စားသူများနှင့် ဒေသခံများကပြောကြားသည်။
ယနေ့ဧပြီလ၂၉ရက်နေ့သည်သံဃာတော်များအားမီးလောင်ဗုံးများဖြင့် ဖြိုခွင်းသည်မှာ ၅လပြည့်မြောက်ခဲ့ သည့်နေ့ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းရက်မတိုင်ခင် ၄ရက်ခန့်အလို ဧပြီလ၂၅ရက်နေ့တွင်လည်း လက်ပံတောင်းတောင်၏ တောင်ဘက်တောင်ခြေတွင် ယာတဲဆောက်ရာမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဒေသခံများ
ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၊ယင်းနေ့တွင်ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူကိုအောင်စိုးကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှ ပဠိပက္ခဖြစ်ပွား ခဲသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲဝင် ၁၅ဦး နင့် ဒေသခံ ၃ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
ယခုသတင်းရေးသားချိန် ဧပြီလ ၂၅ရက် ည ၁ဝနာရီခန့် တွင် ဆည်းတည်းကျေးရွာ၏ အခြေအနေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ
''တုံကနေ ဆည်းတည်းရွာကို သွားတဲ့ သူတိုဆိုက်မှာ ရဲတွေ တန်းစီပြီး စစ်ရေးပြ နေတယ်၊ရွာကိုတော့ ဝင်မစီးသေးဘူး ''ဟု ဆည်းတည်းရွှာသို့ ရောက်ရှိနေသော ကိုဟန်ဝင်းအောင်က The Voice သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
အမေရိကန်တွင် ကရင်နီအမျိုးသားနှစ်ဦး ဓါးထိုးအသတ်ခံရ
အမေရိကန် Arizona ပြည်နယ်၊ Phoenix မြို့မှာ ကရင်နီအမျိုးသားတဦးရဲ့ အသုဘ အခမ်းအနားအတွက် ၀န်ပြုဆုတောင်းနေကြတဲ့ လူအုပ်ထဲမှနှစ်ဦး ဓါးထိုးခံရတဲ့အတွက် အလောင်းတွေကို ယမန်နေ့လည် ၁၂ ရီချိန်မှာ ရဲတွေက စစ်ဆေးဖို့ သယ်ယူသွားခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ညက ကရင်နီအမျိုးသား အယောက် ၄၀ ခန့်က မိမိတို့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအရ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ သေဆုံး သွားခဲ့တဲ့ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် ခူးစိုင်းလောင်ရဲ့ အသုဘ အခမ်းအနားကို သူနေတဲ့ Central Phoenix apartment မှာပြုလုပ်နေကြစဉ် အပြင်ဘက်မှ အုပ်စုလိုက်ရန်ဖြစ်ပြီး Apartment ထဲသို့ ပြေးပုန်းသူတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ယခုလို ဓါးထိုးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ခူးဖရေရယ်က ပြောပါတယ်။
"ကရင်ကလေး၃ယောက်က… မက်စီကိုလား စပိတ်တွေနဲ့လားတော့မသိဘူး… လမ်းပေါ်မှာ သူတို့နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်… ကရင်ကလေးသုံးယောက်က ကျနော်တို့ရှိတဲ့နေရာကို အော်ပြီးပြေးတက်လာတယ်… ကျနော်တို့ကအထဲမှာ… အသုဘအတွက် လူငယ်တွေသီချင်း ဆိုပေးနေကြတာ… ဘယ်သူတွေဝင်လာလဲဆိုပြီး ထွက်ကြည့်ကြတယ်… ထွက်ကြည့်မိတော့ အဲ့ဒီလူတွေက ငါးယောက်ရှိတယ်… သူတို့လိုက်နေတဲ့သူကို သူတို့မမှတ်ဘူးထင်တယ်… အပြင်ဘက်မှာ မိန်းကလေး၂ယောက်နဲ့ ယောက်ကျားလေး ၃ သုံးယောက်က၀ိုင်းပြီး ထွက်ကြည့်တဲ့ကျနော်တို့လူကို ထိုးကြိတ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့က တခါးကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ဖွင့်ထားရင် ကျနော်တို့လူတွေအထဲမှာ အများကြီးခံရမှာစိုးတယ်၊ ဖွင့်ပြီးထွက်ကြည့်မယ် ဆိုပြန်တော့လဲ ခဏနေ နင်ပါပါအသတ်ခံရမယ်လို့ ကျနော်တို့လူတွေပြောတော့ မထွက်ကြည့်ရဲဘူး။ ဒါကြောင့် အပြင်မှာခံနေတဲ့ကျနော်တို့ လူနှစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီး သေသွားတယ်"
လူတစုရဲ့ဓါးထိုးမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူမှာ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ခူးကေးဖိုးဖြစ်ပြီး အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ခူးခါးရယ်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဓါးထိုးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရဲအရာရှိတွေရဲ့ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုနဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကို ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် အသုဘလာသူ ကရင်နီအမျိုးသား ၄၀ဦးကို ရဲတွေက ခေတ္တထိမ်းသိမ်းထားပြီး ယမန်နေ့ နေ့လည်က ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။
အမေရိကန် Arizona ပြည်နယ်မှာ ယခုဆိုရင် ကရင်နီမိသားစုဝင် စုစုပေါင်း ၅၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်။ ပြီးတဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်း ထိုင်းနိုင်ငံကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းကနေ တတိယနိုင်ငံ ခြေချနေထိုင်မှုအစီအစဉ်နဲ့ သွားရောက်အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Written by ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)
ထိုင်းနယ်စပ်မှ ကရင်နီ ဒုက္ခသည် မီသားစုများအားတွေ့ ရစဉ်
စစ်တွေ ဆူပူသူများကို ဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူမည်
ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆွဲတင်စစ် လူဦးရေ စာရင်းကောက်ခံသူများအား အနှောင့်အယှက် ပြုလုပ်ခဲ့သူများ၊ လူထု ဆူပူ အုံကြွမူ ဖြစ်အောင် လူံ့ဆော် ဖန်တီးခဲ့သူများအား ဥပဒေနှင့် အညီ အရေး ယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ၏ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀က်ဆိုက်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က အိမ်ထောင်စု လူဦးရေ စာရင်းကောက်ယူမူကို စာရင်း ကောက်ယူရေး အဖွဲ့ (၁၈) ဖွဲ့ဖြင့် စစ်တွေမြိ့နယ်ရှိ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် စာရင်း ကောက်ယူခဲ့ရာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမူကို ပျက်ပြားစေမည့် အပြုအမူများ၊ လူထု ဆူပူအုံကြွမူ ဖြစ်စေမည့် လူံ့ဆော်မူများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့အတွက် အိမ်ထောင်စု စာရင်းကောက်ယူမည့် အစီအစဉ်ကို ယာယီ ရပ်နားခဲ့ရသည်။
၎င်းနောက်ပိုင်း ညနေ ၃ နာရီတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရရုံးတွင် အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ အရာရှိကြီးများသည် အစည်းအဝေး တစ်ရပ် အရေးပေါ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် လူဝင်မူ ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းမှ အဆိုပါ လုပ်ရပ်သည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမူကို ထိခိုက်စေပြီး ဥပဒေနှင့် မညီသည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်သဖြင့် လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်းပေးကြရန်နှင့် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောကြားသွားကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်းကလည်း ဦးဆောင်ပါဝင်သူများကို စိစစ်ဖေါ်ထုတ်ပြီး ဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယခု စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ဆွဲတင်စစ် လူဦးရေ စာရင်း ကောက်ခံရခြင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခ အပြီးတွင် လူဦးရေ စာရင်း ဇယား အတိုး အလျှော့ တိကျ မှန်ကန်စွာ ရရှိရေး၊ မွေးဖွားခြင်း သေဆုံးခြင်းများကို လိုအပ်သလို စာရင်း အတိုး အလျှော့ ပြုလုပ်နိုင်ရေး၊ ဒုက္ခသည်များအား မိုးမကျမီ အမိုးအကာအောက် ရောက်ရှိရေး၊ ပုံမှန် စားဝတ်နေရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး၊ ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ အခြားဒေသများမှ တရားမ၀င် ရောက်ရှိလာမူ ရှိမရှိကို စစ်ဆေးနိုင်ရေးတို့ အတွက် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ရောက်ရှိပြီးနောက် ဆူပူမူများနှင့် အတူ စာရင်းစစ် အဖွဲ့များအား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မူများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သို့အတွက် တချို့နေရာများတွင် ရော်ဘာ ကျည်ဆံများ အသုံးပြု ပစ်ခတ်ခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဝင်းမြိုင်မှ ထိုသို့ တိုက်ခိုက်မူကြောင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလီ လူငယ် တစ်ဦး ရော်ဘာကျည်ဆံ ထိမှန်၍ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ဟု မီဒီယာများသို့ ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဆွဲတင်စစ် လူဦးရေ စာရင်းစစ်ဆေးမူကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ အတွင်း မောင်တောမြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်ရာ အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
UNOCHA ကိုယ်စားလှယ် EUမှာ မြန်မာအကြောင်း ရှင်းပြ
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ လူသားချင်း စာနာတဲ့ ကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် Barbara Manzi ဟာ EU အဖွဲဝင်နိုင်ငံတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ မနေ့က ဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နေရာဒေသတွေက အခြေအနေတွေနဲ့ လူသားချင်း စာနာတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ အကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ ပြင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသားချင်း စာနာတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ရာမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ အကြောင်း Barbara Manzi ကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ်မေးခဲ့ရာမှာ နေရာ ဒေသအလိုက် အခက်အခဲ အမျိုးမျိုး တွေ့ရပါတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖျဉ်း ပြောရမယ် ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေဆီ အရောက်သွားနိုင်ရေးမှာ ရှုပ်ထွေးပြီး အရာမရောက်တဲ့ ဗျူရိုကရက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကြောင့် အခက်အခဲ တွေ့ရလေ့ ရှိတယ်လို့ Barbara Manzi က ဆိုပါတယ်။
ကချင် ဒေသမှာဆို ဒေသခံ အဖွဲ့တွေရဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ က အတိုင်းထက် အလွန် ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုရပေမယ့် အဲဒီမှာ အကူအညီတွေ လိုအပ်နေဆဲမို့ ဒေသခံတွေ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့တွေ အတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဟာ သိပ်ကို အရေးကြီး ပေမယ့် ကချင်ဒေသက KIA ထိန်းချုပ်တဲ့ နယ်မြေတွေဆီ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ သွားရောက် အကူအညီပေးမှုတွေကို တိုက်ပွဲ အခြေအနေတွေကြောင့် July လကစပြီး ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ Barbara Manzi က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
တခါ ရခိုင်ဒေသက ပဋိပက္ခ ကတော့ လူမျိုးအုပ်စုနှစ်စုကြား ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောပြရာမှာ ဒုက္ခသည်စခန်း တချို့ဆီ ပြည်တွင်းကရော ပြည်ပကပါ လူသားချင်း စာနာတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီတွေ ပေးရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဲဒီက လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းက အဖွဲ့ဝင် တချို့က သိပ်လိုလိုလားလား မရှိတာမို့ အတော်လေး စိုးရိမ်မိပြီး မကြာခင် မုတ်သုံ ရာသီ စတော့မှာ ဆိုတော့ အဲဒီက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတယ်လို့ Barbara Manzi က ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ OCHA အဖွဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတိုင်းအတာကရော ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲလို့ ဘီဘီစီက မေးမြန်းရာမှာ အာဏာပိုင်တွေ ဘက်က နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တာမျိုး ရှိတယ်လို့ တထစ်ချ ပြောနိုင်ပေမယ့်လည်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်း အချက်အလက်တွေ ပေးရာမှာ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိရေးမှာတော့ လိုအပ်မှု တချို့ ရှိနေတယ်လို့ သူက ထောက်ပြခဲပါတယ်။
ဒီအတွက် အာဏာပိုင်တွေ နဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုတွေပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်ထားသလို တခါ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း ဘက်ကလည်း ပဋိပက္ခ ဖြစ်ရာနေရာတွေက ပြဿနာတွေ ကို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ် ၊ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီတွေ ပေးနေရုံတင်မက ဒီဒေသတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ရေရှည် ပြေလည်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကူညီ ဖြေရှင်းပေးဖို့လည်း လိုတယ်လို့ Barbara Manzi က ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့လျှောက် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ EU အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက အကူအညီ ဆက်လက်ပေးနိုင်မှုကို မေးမြန်းတဲ့ အခါ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှာ အခက်အခဲတွေကတော့ အတော်လေး ကြီးမား ရှိပေမယ့် ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ နဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ပေါင်းစုံရဲ့ ရှုထောင့် အမြင်တွေ ပါဝင်ပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာတဲ့ နိုင်ငံ့ အနာဂါတ် တည်ဆောက်ရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ Barbara Manzi က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း EU ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တင်ပြမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အရေးကြီးတာက လောလောဆယ်မှာ EU အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံအကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိလာနေရာမှာ ငွေကြေး အကူအညီတင်မက လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေ၊ လူသားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်း ဥပဒေတွေ ကို သိလာအောင် လုပ်ပေးဖို့နဲ့ အစိုးရကိုတင်မက အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ တခြား အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါ အကူအညီပေးခြင်းအားဖြင့် အားလုံးပါဝင်တဲ့ တလုံးတဝတည်းသော မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် တည်ထောင်နိုင်ဖို့ကို ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ Barbara Manzi က ပြောသွားခဲ့ ပါတယ်။
၁၅၀၀ကျပ်တန် တယ်လီဖုန်းလိုင်းများသည် တာဝါတိုင်နှင့် လေးမိုင်အတွင်း၌သာ အသုံးပြုနိုင်မည်
အသစ်ချထားပေးလျှက်ရှိသည့် ၁၅၀၀ ကျပ်တန် မိုဘိုင်း တယ်လီဖုန်းလိုင်းများသည် တာဝါတိုင်နှင့် လေးမိုင်ပတ်လည်အတွင်းသာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွှက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်မည်ဟုသိရှိရသည်။
အဆိုပါတန်ဖိုးနည်းဖုန်းလိုင်းအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ တာဝါတိုင်ပေါင်း ၂၈၂ခုတည်ဆောက်ထားရှိသည်ဟုသိရပြီး အဆိုပါတာဝါတိုင်ဧရိယာအတွင်း၌ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခေါ်ဆိုမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ကြေညာထားသည်။
စီဒီအမ်အေဖုန်းလိုင်းများအတွက်ယခင်တည်ဆောက်ထားရှိသည့် တာဝါတိုင်များမှာ နည်းပညာအရ မိုင် ၂၀ အတွင်း၌ ဆက်သွယ် ပြောဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု သိရပြီး ယခုချထားပေးလျှက်ရှိသည့် ၁၅၀၀ ကျပ်တန် MEC အမှတ်တံဆိမ်ပါ တယ်လီဖုန်းလိုင်းများမှာ တာဝါတိုင်နှင့် လေးမိုင်အတွင်းမျှသာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက် များစွာ ကွာဟမှု ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ဂျီအက်အမ် ဖုန်းလိုင်းများ၏ တာဝါတိုင်များမှာ နည်းပညာအရ ၁၀ မိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း.စီဒီအမ်အေ ၄၅၀ များအတွက် စိုက်ထူးထားသည့် တာဝါတိုင်များသည် အတားအဆီးများမရှိသည့် လွင်ပြင်ဒေသများနှင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတမ်း ဒေသများ၌ မိုင် ၂၀ နှင့် အထက်ကိုပင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါဖုန်းလိုင်းများသည် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ၌ စတင်ချထားပေးခဲ့ သည့် ဖုန်းလိုင်းများဖြစ်ပြီး ရပ်ကွက်.ကျေးရွာများ၌ကံစမ်းမဲ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးခဲ့ သည့် ဖုန်းလိုင်းများဖြစ်ပြီး လာမည့်လစဉ်အတိုင်း၌လည်း အဆိုပါအရေအတွက်အတိုင်း တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ချထားပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရသေ့တောင် လယ်သမားတွေကို သီးစား ပြန်မချ
ရခိုင် ပြည်နယ် ရသေ့တောင် မြို့နယ်က လယ်သမားတွေရဲ့ အခြေအနေ အရင်ထက် ပိုဆိုး လာတယ်လို့ အဲဒီမှာ ကွင်းဆင်း နေတဲ့ လယ်ယာမြေ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် တဦးက ဆိုပါတယ်။
တပ်က သိမ်းထားတဲ့ လယ်တွေမှာ လယ်သမား တွေကို ဒီနှစ်ကစပြီး သီးစားပြန်ချ မပေးကြောင်း ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ပြောပါတယ်။
အရင်ကတော့ စစ်တပ်က သိမ်းထားတဲ့ လယ်တွေမှာ တဧက စပါး ဆယ်တန်းနှုန်း သီးစားချပြီး ပြန်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့ကြပေမယ့် ခုနှစ်က စပြီး ဒီစနစ်ကို ပိတ်လိုက်လို့ လယ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ကုန် ကြတာပါ။
ဒါကြောင့် အခက် ကြုံနေတဲ့ လယ်သမားတွေက တပ်က မသုံးခင် လယ်တွေကို ပြန်ပြီး လုပ်ခွင့် ပေးဖို့ အသနားခံ တောင်းဆို နေကြ တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ဒီ တတိယ အကြိမ်မှာတော့ ကော်မရှင်ဟာ ရသေ့တောင် မြို့နယ်က လယ်မှု ၂ မှု၊ ကျောက်တော် မြို့နယ်က ၁၂ မှု၊ ပေါက်တော မှာ ၁၁ မှုနဲ့ စစ်တွေက ၄ မှု၊ စုစုပေါင်း ၂၉ မှုကို စစ်ဆေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အများစု လယ်မြေတွေကို စစ်တပ်က သိမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်က သိမ်းထားတဲ့ လယ်မြေတွေ များရတဲ့ အကြောင်းက ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ရခိုင်မှာ စစ်တပ်တွေ ပိုချလို့ လယ်မြေတွေ အသိမ်းခံခဲ့ ရတာ ဖြစ်ပြီး မူလထဲက ရခိုင်မှာ လယ်မြေက များများစားစား မရှိဘူးလို့ ဦးဖေသန်းက ရှင်းပြပါတယ်။
အရင် နှစ်ကြိမ်က စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် တွေကို ပြည်ထောင်စု ကော်မရှင်ကို တင်ပြထားပြီး အစီရင်ခံစာ တွေကို ကော်မရှင် ကနေ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန တွေကို ပို့ပေးလိုက်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
အခု အချိန်ထိ ဝန်ကြီးဌာနတွေက ဘာမှ တုံ့ပြန်တာ မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
လယ်သမား တွေကတော့ စိုက်ပျိုးရာသီ နီးလာတဲ့ အတွက် ကော်မရှင် အဆုံး အဖြတ် ကို မျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီးနဲ့ စောင့်နေကြ ပါတယ်။
သိမ်းမြေမှာ လယ်သမားကို သီးစား ပြန်မချ
အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု ဂါရတ် ဘေးလ် ရ
တော်တင်ဟန် ဟော့စပါးရဲ့ ကစား သမား ဂါရတ် ဘေးလ်ကို Professional Footballers' Association PFA ကြေးစား ဘောလုံး သမား များ အဖွဲ့ က ပေးတဲ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘောလုံး ရာသီ အတွက် အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမားနဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်နဲ့ အောက် အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမားဆု နှစ်ခု စလုံးကို ရရှိသွား ပါတယ်။
ဘောလုံးရာသီ တခု အတွင်း ဒီလို အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမားနဲ့ သက်ငယ်တန်း အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမားဆု ၂ ခု စလုံးကို တပြိုင်နက် ရွေးချယ် ခံသူ အရင်က နှစ်ဦး သာ ရှိခဲ့ဘူး ပါတယ်။
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘောလုံး ရာသီ အတွက် အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမားဆု အတွက် ဆန်ကာတင် ၆ ဦးထဲက ဂါရတ်ဘေးလ် ကို ရွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ကျန် ၅ ဦးကတော့ မန်ယူက ဗန်ပါဆီ နဲ့ မိုင်ကယ် ကဲရစ်၊ ချဲဆီးလ်က အီဒင် ဟက်ဇတ်နဲ့ မာတာ၊ လစ်ဗာပူးလ်က ဆွာရက်ဇ်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘောလုံးရာသီ အတွက် အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမားဆုကို အဲဒီ အချိန်က အာဆင်နယ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဗန်ပါဆီက ရရှိခဲ့ပါတယ်။
စစ်တပ်လိုင်စင်တပ် ကားတွေကို တရုတ်မှာ တားမြစ်
တရုတ် နိုင်ငံက စစ်ဖက် ဆိုင်ရာ အရာရှိ တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဇိမ်ခံ ကားတွေမှာ စစ်တပ် လိုင်စင် နံပါတ်ပြား တွေ တပ်ပြီး အသုံးပြု မောင်းနှင် တာတွေ ကို တရုတ် အစိုးရက တားမြစ် တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
ကားပိုင်ရှင် အရာရှိ တွေဟာ သူတိုရဲ့ ဇိမ်ခံကား တွေမှာ စစ်တပ် လိုင်စင် နံပါတ်ပြား တပ်ထားတဲ့ အတွက် မီးပွိုင့်မှာ မီးနီ နေလည်း ဖြတ်မောင်း ခွင့် ရှိပြီး၊ တခြား သော ယာဉ်စည်းကမ်း တွေကို လစ်လျူရှု ချိုးဖောက် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို စစ်ဖက် ဆိုင်ရာ လိုင်စင် နံပါတ်တွေကို BMW နဲ့ Mercedes လို ဇိမ်ခံ အမျိုး အစား ကားတွေမှာ တပ်ဆင် အသုံးပြု နေတာ ဖြစ်ပြီး အခုတော့ ဒါတွေ ကို ပိတ်ပင် တားမြစ် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဖက် ဆိုင်ရာ လိုင်စင် နံပါတ် တပ်ထားတဲ့ ယာဉ်တွေ ပိုင်တဲ့သူ အားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ကားတွေကို ပြန်ပြီး မှတ်ပုံ တင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမ0x081မတ ရှီဂျင်ပင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုသစ် အောက်မှာ အရာရှိတွေ အထူး အခွင့် အရေးတွေ ယူပြီး မတရား လုပ်နေ တာတွေကို အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး တစိတ် တပိုင်း အနေနဲ့ တားဆီး ချေဖျက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အငြိမ်းစား အရာရှိ တွေနဲ့ လက်ရှိ တာဝန်ရှိ အရာရှိ တွေရဲ့ မိသားစု ဝင်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ကပါ အခွင့်ကောင်း ယူပြီး စစ်တပ် လိုင်စင် နံပါတ်ပြား တွေကို မကြာခဏ ဆိုသလို အသုံးပြု နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဖက် ဆိုင်ရာ လိုင်စင် နံပါတ်ပြားတွေကို ဇိမ်ခံ အမျိုး အစား ကားတွေမှာ တပ်ဆင် အသုံးပြု နေ
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် သေဆုံးရမှု ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲ
ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ပေါ့ပ် အဆိုကျော် မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင်ရဲ့ မိခင်နဲ့ သူ့ကလေး သုံးယောက်က သူတို့ရဲ့ ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှု အတွက် ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီး လျော်ပေးဖို့ သူ့ရဲ့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ကမကထ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ A-E-G ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲဆို လိုက်ပါတယ်။
မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အထိဖြစ်အောင် အိပ်ဆေး အပြင်းစားတွေ ထိုးပေးခဲ့တဲ့ Dr Conrad Murray ကို A-E-G ကုမ္ပဏီက ငှားရမ်းပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခိုင်းတဲ့ အတွက် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် သေဆုံးရမှုမှာ အဲဒီကုမ္ပဏီကလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုပြီး တရားစွဲဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူသေဆုံးတာ လေးနှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပေမယ့် သူမသေခင် အချိန်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ငွေကြေးကိစ္စတွေကို အခု တရားမမှုမှာ အလေးထား ဖြေရှင်း သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
အခု အမှုဟာ သုံးလလောက် ကြာကောင်း ကြာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် မိသားစု အေအီးဂျီ ကုမ္ပဏီကို ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီ ပေးဖို့ တရားစွဲ
ဆီးရီးယားဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၀န်ကြီးချုပ် အထိအခိုက်မရှိ လွတ်မြောက်
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြို့တော် Damascus မှာ ယာဉ်တန်းတခုနဲ့ ခရီးသွားနေတဲ့ ဆီးရီးယား ၀န်ကြီးချုပ် ၀ဲလ် အယ်လ် ဟယ်ကွီ (Wael al-Halqi) ကို ဗုံးခွဲ လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုဟာ မြို့တော်ရဲ့မြောက်ပိုင်း Mazzeh မြို့နယ်အတွင်း ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ကတော့ တစုံတရာ အနာတရမရရှိဘဲ လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာက ကြေညာပါတယ်။
သတင်းမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ဖောက်ခွဲမှုလို့ သုံးနှုံးသွားပါတယ်။
ဆီးရီးယားသမ္မတ ဘာရှာ အယ်လ် အာဆတ် (Bashar al-Assad) ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်စေဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အတိုက်အခံတွေကို အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဘက်က အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလေ့ ရှိပါတယ်။
Damascus မြို့တော်ရဲ့ Mazzeh မြို့နယ်အတွင်းမှာ ထိပ်တန်းအစိုးရအရာရှိတွေ အများအပြား နေထိုင်ကြပါတယ်။
မြန်မာလူမှုဘ၀ တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ အလှမ်းဝေးစဲ ဒေါ်စုပြောကြား
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေ မရှိသေးဘဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေ အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုနဲ့တခုအကြား တင်းမာမှုတွေကို ကြည့်ရင် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့် မြတ်ရေး ဖော်ဆောင်ဖို့ ကိစ္စဟာလည်း အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်လို့ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ညီလာခံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောသွားခဲ့တာပါ။ မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်တချို့ကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြထားပါတယ်။
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် Ulaanbatar မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ညီလာခံကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တက်ရောက်နေတာမှာ မနေ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေ ဘယ်လောက်အထိ ခရီးရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာကစလို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ၊ ကွဲပြားတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းတွေကြားက တင်းမာမှုတွေနဲ့၊ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကိစ္စတွေအပြင် မွန်ဂိုလီးယားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြား တူညီမှုတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ သိသိသာသာ မမြင်ရသေးသ၍ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေ အောင်မြင် တယ်လို့ မပြောနိုင်သေးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ကျမတို့ ရရှိထားတဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှု အဆင့်ရောက်ဖို့ သိပ်ကို ဝေးပါသေးတယ်။ ဒီကိစ္စ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါရစေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမအတွက်ကတော့ တိုးတက်တယ်ဆိုတာက ပြည်သူတွေ ရဲ့ နေ့တဓူဝဘ၀တွေမှာ စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိလာတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ် ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘ၀တွေ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေတခုကို ပြောင်းလာပြီလို့ ကျမတို့ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် သိရှိလာတဲ့အချိန် မရောက်မချင်း ကျမတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အောင်မြင်နေပြီလို့ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ ပြည် သူတွေက သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေ ပိုမို ကောင်းမွန် တိုးတက်လာပြီလို့ ပြောနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ကျမတို့ မရောက်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအခြေအနေ ရောက်အောင် ကျမတို့ အများကြီး ဆက်လုပ်ရပါဦးမယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုနဲ့တခုအကြား တင်းမာမှုတွေကို ကြည့်ရင် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ပြသနေတဲ့ အကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အခုလို ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟာ ကျမတို့ တိုင်းပြည်အတွက် မဖြစ်မနေ ဖော်ဆောင်ရမယ့် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်တို့လည်း သိကြမှာပါ။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ ခုချိန်ထိ တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်သလို မကြာသေးခင်က လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုနဲ့ တခုအကြား ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေဟာ ကျမတို့ တိုင်းပြည်အတွက်၊ ကမ္ဘာကြီးအတွက် မဖြစ်မနေ ဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မတူကွဲပြားမှုတွေကို ဖြေရှင်း ကျော်လွှား နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ ပြသဖို့ လိုပါတယ်။”
အင်အားကြီး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံနှစ်ခုအကြား တည်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနဲ့ မွန်ဂိုလီးယား နှစ်နိုင်ငံဟာ ပထ၀ီဝင် အနေအထားအရ တူညီမှုတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဒီလို အိမ်နီးချင်း အင်အားကြီး နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ တန်းတူညီတူ ဆက်ဆံရေး ထူထောင်နိုင်ဖို့အရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ ဆီကနေ လေ့လာ သင်ယူစရာတွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့လည်း မြန်မာနဲ့ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောသွားခဲ့ပါ တယ်။
“နိုင်ငံတခုနဲ့တခု ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးဆုံးက အစိုးရ အချင်းချင်းကြား ဆက်ဆံရေး မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူအချင်းချင်းကြား ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံလိုပဲ အင်အားကြီး နိုင်ငံကြီး နှစ်ခုကြားမှာ တည်ရှိနေတာချင်း တူပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ ကပ်လျက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။”
“သမိုင်းတလျှောက် ဒီနိုင်ငံနှစ်ခုလုံးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ကျမတို့ တည်ဆောက်ခဲ့သလို၊ ရှေ့လျှောက်လည်း ကျမတို့ ဒီလိုပဲ တည်ဆောက် သွားချင်ပါတယ်။ ကျမတို့လို နိုင်ငံငယ်လေးတွေဟာ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေနဲ့တန်းတူ ခိုင်မာတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အများ လေးစားရတဲ့ မိတ်ဆွေ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကျမတို့ဟာလည်း တခြားနိုင်ငံတွေနည်းတူ ကမ္ဘာကြီးအတွက် တနည်းတဖုံ ပေးဆပ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ် ဆိုတာကို ပြသ ချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဥပဒေပြုရေးအပိုင်းမှာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိပေမဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေးပိုင်းမှာတော့ ပိုပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိဖို့အပါအ၀င် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
မနေ့က ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ စကားပြောခဲ့တဲ့ မွန်ဂိုလီးယား သမ္မတ စာခီယာ အဲလ်ဘတ်ဒေါ် (Tsakhia Elbegdorj) ကတော့ အခုလို ညီလာခံမျိုးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရင်က ဗွီဒီယိုကတဆင့် မိန့်ခွန်း ပေးပို့နိုင်ခဲ့တာကနေ အခု လူကိုယ်တိုင် လာရောက်နိုင်တဲ့အတွက် အထူး ၀မ်းသာကြိုဆိုရတဲ့အကြောင်း ပြော သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ညီလာခံက ချီးမြှင့်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်သူတွေကို ပေးအပ်တဲ့ Geremek လူ့အခွင့်အရေးဆုကိုလည်း ဒီပွဲမှာ လက်ခံရယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျင်းပနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ညီလာခံကို လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းသစ်စ နိုင်ငံများဆိုင်ရာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ တိုမီကာ တယ်လမန် (Tomicah Tillemann) လည်း တက်ရောက်နေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများ အပါအ၀င် တခြား အကြောင်းအရာ အများအပြားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ပင်တိုင် ဆွေးနွေးသူအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီညီလာခံကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တစ်ရာကျော်က ရာနဲ့ချီတဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်နေကြတာ
ရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အကြံပြုချက် ကင်တားနားနဲ့ အမေရိကန် လေ့လာသုံးသပ်မည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက လူ ၂၀၀ ၀န်းကျင် သေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်း သောင်းနဲ့ချီ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရရဲ့ စုံစမ်းရေး အစီရင်ခံစာဟာ ဒေါင့်ပေါင်းစုံကို လေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomás Ojea Quintana) က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အစီရင်ခံစာ အပါအ၀င် ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေအပေါ်မှာ လေ့လာသုံးသပ်ပြီး၊ မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း သူ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ပြန်လည် ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာ သုံးသပ်နေတယ်လို့ ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာဟာ နဂိုသတ်မှတ်ချိန်ထက် နောက်ကျပြီး ထွက်လာတာပါ။ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်စဉ်တွေအပါအ၀င် နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းကိုပါ သုံးသပ် တင်ပြထားသလို၊ ပြဿနာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရေးအတွက် အကြံပြုချက်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အတော်များများ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomás Ojea Quintana) ကတော့ ကြိုဆိုလိုက်ပြီး၊ ဒီအပေါ်မှာ သူ့အမြင် သုံးသပ်ချက်တွေကိုတော့ မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ အခုနောက်ဆုံး ထွက်လာပြီဆိုတာ ကျေနပ်စရာပါ။ ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အကြံပြုချက် တခုချင်းကို ကျနော် အခု လေ့လာသုံးသပ်နေပါတယ်။”
အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ မနေ့က ရန်ကုန်မှာပဲ ကော်မရှင်လူကြီးတွေ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြံပြုချက်တွေထဲမှာတော့ ရခို်င်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခတွေကို ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက် လုံခြုံရေး အင်အားတွေကို တိုးမြှင့်ချထားဖို့ဆိုတာ ပါဝင်သလိုပဲ၊ အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီတွေ ပေးနိုင်ရေးကိုလည်း အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြဿနာတွေက ဒေသတွင်းထဲမှာ ရှိနေဆဲမို့လို့၊ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေက ယူဆကြပါတယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်က နိုင်ငံသား ဥပဒေတွေကို အသေအချာ လိုက်နာမယ်ဆိုရင် ပြဿနာ ကြီးထွားလာစရာ မရှိသလို၊ အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ မူဆလင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လူဦးရေ အလျင်အမြန် များပြားလာတာကြောင့်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ကော်မရှင်က သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ လူသားရပ်တည်မှု အကြပ်အတည်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ တင်ပြထားပါတယ်။ အစီရင်ခံစာ တခုလုံးမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ရှောင်ထားပြီး၊ ဘင်္ဂါလီ ဆိုပြီး သုံးနှုန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အခေါ်အဝေါ် ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အခန်းတခုအနေနဲ့ ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ မစ္စတာ ကင်တားနားကတော့ ဒီ အစီရင်ခံစာဟာ အခြေအနေ အတော်များများကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီအစီရင်ခံစာကို ကြည့်ရတာ ဒေါင့်အစုံအလင် တင်ပြထားပုံပါပဲ။ ဒါ အတော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို အစီရင်ခံစာမျိုး ထွက်လာစေဖို့ ကျနော်တို့အားလုံး မျှော်လင့်ထားတာပါ။ ကိစ္စရပ်တိုင်းကို ကော်မရှင်က လေ့လာ တင်ပြထားပါတယ်။ တင်ပြထားတဲ့ ဒီကိစ္စရပ်တိုင်းကို အသေအချာ လေ့လာပြီး ကျနော် ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီမူဆလင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာလို့ မသုံးတာလဲ ဆိုတဲ့ ရှင်းလင်းထားချက်တွေ၊ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ နစက အဖွဲ့တွေအကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေရှိတဲ့ အာဏာပိုင်တွေ ဥပဒေကင်းလွတ်ခွင့် ရနေတဲ့ကိစ္စ၊ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးကိစ္စ၊ နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ လိုအပ်မှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းရပ် အတော်များများကို ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။”
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လနဲ့ အောက်တိုဘာလတွေအတွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးဆန်တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကြောင့် လူပေါင်း ၁၉၂ ဦး သေဆုံးပြီး၊ ၂၆၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့တယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီ ဖြစ်ရပ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကနေ ၂၇ ဦးပါဝင်တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့ပေးခဲ့တာပါ။
ကော်မရှင်ကနေ အစီရင်ခံစာ ထွက်မလာနိုင်ခင်၊ အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာပဲ မိတ္ထီလာမှာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ အစီရင်ခံစာ မထွက်နိုင်တဲ့အပေါ် ဝေဖန် ပြစ် တင်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီကော်မရှင်ထဲမှာတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရော၊ ဟိန္ဒူ၊ မူဆလင်၊ ခရစ်ယာန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာသာစုံကလူတွေရော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ကတော့ အခု အစီရင်ခံစာပါ ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးနိုင်ရေး ထည့်သွင်း အကြံပြုထားတဲ့အပေါ် ကြိုဆိုပါတယ်။ HRW အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ ရခိုင်ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာတစောင် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာတော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ပတ်သက်မှုရှိတယ်။ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်တွေကို အပြစ်တင်ထားပါတယ်။
ဒီ လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းစံထားတွေနဲ့အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့၊ ရေရှည်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုင်တွယ်သွားဖို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနကတော့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
အခြား နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနည်းတူပဲ၊ ဒီကော်မရှင် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်တွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ပြန်လည် သုံးသပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့မှာတော့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ဒုက္ခသည်များနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများဆိုင်ရာ ဒုတိယ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး ကယ်လီ တဲလ်မန်း (Kelly Tallman) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားပြီး အဲ့ဒီက လူသားချင်း စာနာကူညီမှု အရေးပေါ် လိုအပ်ချက်တွေကို ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူမြို့ပေါ်မှာ မနေ့ညက တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော်(DKBA)တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF)တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားတာကြောင့် ဒေသခံ ၄၀၀ လောက်ဟာ အိုးအိမ်တွေစွန့်ခွာပြီး တိုက်ပွဲလွတ်ရာကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနေ့ည ၁၁ နာရီကျော်ကနေ မနက် ၂ နာရီကျော်ထိ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ BGF ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်က မြို့ပေါ်မှာ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“ပစ်တာက ညကတစ်ညလုံးကတော့ ၁၁ နာရီခွဲကနေ ၂ နာရီခွဲအထိ ပစ်တာ၊ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ အနီးစပ်ဆုံးရပ်ကွက်တွေကတော့ အကုန်ပြေးရတာပေါ့၊ ဒေသခံ သုံး၊ လေးရာဝန်းကျင်လောက်ပေါ့၊ ကျနော်တို့ မြိုင်ကြီးငူနဲ့ဝေးတဲ့ တချို့လေးငါးခြောက်မိုင် ခုနှစ်မိုင်ဝေးတဲ့ နေရာတွေပေါ့နော်၊ အဲဘက်တွေ တိမ်းရှောင်နေရတာပေါ့၊ ကျနော်တို့လည်းဖြစ်တဲ့နေရာကို ဘယ်သူမှမသွားရဲဘူး၊ ဒီနေ့မနက်ဘာမှ လောလောဆယ် ထူးခြားမှုမရှိသေးဘူး၊ သူတို့ BGF တပ်ကတော့ လုံခြုံရေး တအားတင်းထားတာပေါ့နော်၊ BGF ကတော့ သွားလိုက်လာလိုက်ပဲ”
အဲဒီလိုတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတာ ၃ ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံတွေအကြား နေ့ရောညပါ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေကြရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ရခိုင်အရေး စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာအကြောင်း ရှင်းလင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ၂၂ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဟာ ကောလဟာလကို အစပြုပြီး သူ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက်အစွဲကြောင့် ဖြစ်ပွား ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင်က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"ဒီပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် အမျိုးမျိုးပြောကြတာ၊ ဘယ်ဟာတွေကတော့ ဘယ်အတိုင်းအတာလောက်ထိ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘယ်ဟာတွေကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ၊ ဒါကိုကျနော်တို့ အသေးစိတ်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေရှိတယ်၊ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် တင်ပြခဲ့တာတွေရှိပါတယ်၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုက ပဋိပက္ခကို ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပါတယ်"
အဲဒီအခြေအနေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ နောင်အနာဂတ်မှာ အဲဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှာ အဖွဲ့ဝင်၂၅ ဦးပါဝင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ အဲဒီကော်မရှင်က အဲဒီဒေသခံနှစ်ထောင်ကျော်ကို ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းစုံစမ်းချက်တွေပြုလုပ်ပြီး အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာ သမိုင်း၊ လူမှုရေး သိပ္ပံပညာရှင်၊ ဥပဒေပညာရှင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးခေါင်းဆောင်တွေ ပါဝင်ကြပြီး အစီရင်ခံစာမှာ လူမျိုးစုတစ်စု(သို့)အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို ဦးတည်ပြီး အပြစ်တင်တာမျိုး မပြုလုပ်ဘဲ ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုသာ ဦးတည်ပြီး အကြံပြုတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ ကျင်းပခဲ့စဉ်
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဟာ ဒီမိုကရေစီကို ပျက်သုန်းစေတဲ့ အရာဖြစ်တယ်လို့ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရောက်နေ တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီနေ့ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။ လူလန်ဘာတာမြို့တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ညီလာခံမှာ အဲဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မွန်ဂိုလီးယားသမ္မတက ဖိတ်ကြားတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဧည့်သည်တော်တစ်ဦး အဖြစ် ညီလာခံမှာ တက်ရောက်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ချီးမြှင့်တဲ့ Geremek ဆုကိုလည်း လက်ခံရယူဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီဆုဟာ ပိုလန်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတ၀န်းဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး ဆောင်ရွက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ထူထောင်သူတွေထဲ ပါဝင်တဲ့ ပါမောက္ခ Bronisław Geremek ကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မွန်ဂိုလီးယား သမ္မတအိမ်တော်မှာ “မွန်ဂိုလီးယားနဲ့ မြန်မာလွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ရှေးရှုရာလမ်း” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ သမ္မတနဲ့အတူ မနက်ဖြန်ဟောပြောမှာဖြစ်ပြီး သတင်းစာဆရာတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ညီလာခံဟာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ချီးမြှင့်တဲ့ Geremek ဆုကို လက်ခံရယူဖို့ မွန်ဂိုလီးယားကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ပုံ - photo: Community of Democracies